We Fight We Win. -- " More than Media ": ရေပေါ် လေ၀ဲ စပါးခွံများ (သို့) ဗိုလ်သိန်းစိန်၏ ဒီမိုဧချင်း ( ရဲဘော်ကျော်သန်း)
LAP TOP ကို ဒီလိုရေးပါတယ်။ Lap talk မဟုတ်ပါဘူးကွယ်.. ကိုစာရေးဆရာတို့ ရယ်
You may be right about it however please realise that you are in the sinking boat.
The New Genetation is Than Shwe
They all are the Military Gangsters who destroyed our country for 50 years,making the richest in country
in Asia(1960)to become the poortest in the world.
The worst remarkable history in Burma.
ခင်ဗျားရဲရဲတောက်စာတွေကို အရင်အခြေအနေတုံးကတော့ သည်းခြေကြိုက်ခဲ့တာ အမှန်ပါ။ အခုအခြေအနေမှာတော့ ခင်ဗျားအတွေးတွေ စာတွေဟာ ကိုယ်တိုင်မပါဝင်ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်အတွက် စပျစ်သီးချဉ်နေရုံမျှသာ ဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်လာပါတယ်။ အရင်က အခြေအနေတုံးက တိုင်းပြည်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တယောက် ဟာ တိုင်းပြည်မှာ ဒီလို issues တွေရှိတယ်ဆိုတာကို ၀န်ခံဖို့တောင် မဖြစ်နိုင်ရာကနေ။ ဒါတွေရှိနေကြောင်း အသိမှတ်ပြုရုံမက ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ပါ ကြိုးစားနေကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ချပြလာတဲ့ဟာကို မကြိုဆိုပဲ နေလို့မရပါခင်ဗျား။ လေထဲမှာပဲပြောတာလား အလုပ်မပါဘူးလားဆိုတာတော့ ခင်ဗျားလဲ မျက်စိပါတာပဲ ဦးနှောက်ရှိတာပဲ၊ ကျန်တဲ့သူတွေမြင်သလိုတော့ မြင်မိမယ်ထင်ပါတယ်။ မမြင်မိရင်တော့ ခင်ဗျား အပြင်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ကျော် လှုပ်ရှားခဲ့သမျှ အခုမှ ထောင်က ထွက်လာတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင် .. ကိုကိုကြီးတို့ မြင်သလောက်တောင် မမြင်နိုင်တဲ့အတွက် ခင်ဗျားကိုယ်ခင်ဗျား တခုခုမှားနေလောက်ပြီဆိုတာ ပြန် သုံးသပ်ဖို့သင့်နေပြီ.. အမှန်က မင်းကိုနိုင်၊ကိုကိုကြီးတို့ ထောင်ထဲနေခဲ့ရတဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၀နီးပါး အချိန်တွေနဲ့ ခင်ဗျား အပြင်မှာ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ လဲဖို့တောင် မတန်ဘူး...
I like it very much. Ko Kyaw Than.....you areagenuine commentator and genius one. Excellent job!
Ko Kyaw Than,
I totally agree with you. Their ( junta) tones and words might have changed, but not their mentality. Khway Myee Kauk Khi Taut Sut. They will never ever change.
ဟုတ်ပါတယ် laptop နဲ့lap talk မှားတာကြီး က တော့တော်တော့ကို အရုပ်ဆိုးလွန်း ပါတယ်။ အစိုးရဘက် က လူတွေထောက်ပြမယ်ဆိုရင် တော်တော် အရှက်ရစရာကြီးပါ။ ဒါလေးတောင် မသိဘဲနဲ့ စကားကြီးစကားကျယ်တွေ ပြောနေ ကြ ပါ လာ ဆို ပြီး blog ရဲ့ သိက္ခာ ကို ပါ ထိခိုက် နိုင် ပါတယ်။ မမှားသင့် တဲ့ အမှားတစ်ခုပါ။ စာရိုက်မှားတာ မဟုတ်ပါဘူး။မသိလို့ ကို မှားတဲ့ အမှားကြီးပါ။ ကိုမိုးသီးဇွန် ခင်ဗျား..တချိန်တုန်းက အစ်ကိုပြောခဲ့ ဘူးပါတယ်။ မြန်မာ ဖြစ်ပြီး မြန်မာလို မရိုက်တတ်ရင် ရှက် ဖို့ အလွန် ကောင်းပါတယ် လို့အစ်ကိုပြောဘူးပါတယ်။ အခုလဲ ဒါလေးတောင်မသိပဲ နဲ့အစ်ကို့ ရဲ့ blog မှာ တက်ရေးနေတာမျိုးလဲရှက် ဖို့ ကောင်းပါတယ် လို့ပြောချင်ပါတယ်။ ကျနော် က အစ်ကို့ blog ရဲ့ပရိတ်သတ်ပါ။တဖက်လူ က မထောက်ခင် မှာပြန် ပြင် နိုင်အောင်ကြိုးစားစေချင်ပါတယ် ။
Laptop ရေးတာမှားတာများကွ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောနေကြတယ်....အဲဒါဗမာစကားလည်းမဟုတ်ဘူး..အင်္ဂလိပ်စကား...ဗမာစကားသာ မမှားရလေအောင် သတိထားကြပေါ့..ဟုတ်ပြီလား
'ကိုမိုးသီးဇွန် ခင်ဗျား..တချိန်တုန်းက အစ်ကိုပြောခဲ့ ဘူးပါတယ်။" ပြောခဲ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူး..ပြောခဲ့ဖူးတာပါ။